नेदरल्याण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वकीलहरू - Law & More
के तपाइँ उद्यम स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ? वा तपाइँ पहिले नै उद्यमी हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, त्यसोभए तपाईंले पक्कै पनि व्यवसाय कानूनसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। पहिले नै एक उद्यम को स्थापना को क्षण मा तपाईं कुन कम्पनी फारम सबैभन्दा उपयुक्त छ प्रश्न सामना गर्न पर्छ। साथै, सबै प्रकारका सम्झौताहरु ड्राफ्ट गर्नु पर्छ। वर्षौंदेखि कम्पनी भित्र पनि धेरै परिवर्तन गर्न सक्दछ। कम्पनी फारम अब उपयुक्त छैन। शेयरधारकहरू वा सहयोगीहरू बीच विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
कर्पोरेट मालिकको आवश्यकता छ?
के तपाइँ उद्यम स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ? वा तपाइँ पहिले नै उद्यमी हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, त्यसोभए तपाईंले पक्कै पनि व्यवसाय कानूनसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। पहिले नै एक उद्यम को स्थापना को क्षण मा तपाईं कुन कम्पनी फारम सबैभन्दा उपयुक्त छ प्रश्न सामना गर्न पर्छ। साथै, सबै प्रकारका सम्झौताहरु ड्राफ्ट गर्नु पर्छ। वर्षौंदेखि कम्पनी भित्र पनि धेरै परिवर्तन गर्न सक्दछ। कम्पनी फारम अब उपयुक्त छैन। शेयरधारकहरू वा सहयोगीहरू बीच विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। वा हुनसक्छ तपाईंको उद्यममा पर्याप्त तरल सम्पत्ति छैन। Law & More डच व्यापार कानून को क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ हो। स्थापना को क्षण देखि कम्पनी को तरलता को क्षण सम्म, हामी तपाईंलाई कानूनी र वित्तीय सल्लाह प्रदान गर्न सक्छौं।
> कानूनी व्यक्ति कानून
> निगम प्रशासन
> मर्ज र अधिग्रहणहरू
> No-nonsense मानसिकता
कानूनी व्यक्ति कानून
हामी मा Law & More सहि कम्पनी फारम छनौटमा मद्दत गर्न सक्दछ। कानुनी व्यक्तित्वका साथ फारमहरू र कानुनी व्यक्तित्व बिना फारामहरू बीच भिन्नता सकिन्छ। यदि कुनै उद्यमसँग कानुनी व्यक्तित्व छ, यसले प्राकृतिक व्यक्तिको जस्तै कानूनी लेनदेनमा पनि भाग लिन सक्छ। त्यो अवस्थामा तपाईंको कम्पनी सम्झौताहरू सम्पन्न गर्न सक्षम छ, सम्पत्ति र debtsण छ र जिम्मेवार समात्न सकिन्छ।
Law & More सोमबार देखि शुक्रवार सम्म उपलब्ध छ
०:08:०० देखि २२:०० सम्म र सप्ताहन्तमा ०:00:०० देखि १:22:०० सम्म
हाम्रो वकिलहरु तपाईको मुद्दा सुन्नेछन् र माथि आउँनेछन्
कार्यको उपयुक्त योजनाको साथ
जब तपाईं कर्पोरेसन चलाउन चाहानुहुन्छ, तपाईंले कम्पनी फारम छनौट गर्न आवश्यक पर्दछ। कुन कानूनी फारम उपयुक्त छ विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै निगमनको लागि आवश्यकताहरू, कानुनी व्यक्तित्व, संयुक्त र धेरै दायित्व र शेयरको ट्रान्सफरेबिलिटी। र के हुन्छ यदि एक सामान्य साझेदारी (VOF) को एक साझेदार कम्पनी छोड्न चाहन्छ? र फ्लेक्स - BV को बारेमा के छ? यी विषयहरू कम्पनी कानून द्वारा शासित छन्। धेरै चीजहरू करारको रूपमा अग्रिम रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसकारण कम्पनी स्थापना गर्नु अघि कर्पोरेट वकिलको सेवाहरू समावेश गर्न सुझाव दिइन्छ।
के तपाइँ एक कम्पनीको रूपमा, तपाइँको बजार स्थिति कायम राख्नुको उद्देश्यको साथ अन्य कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न चाहानुहुन्छ? वा यसको विपरित, नयाँ बजारमा प्रवेश गर्ने योजनाको साथ? यदि तपाईं रणनीतिक गठबन्धन गठन गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई जोखिम र फाइदाहरूको बारेमा सल्लाह दिन सक्छौं। यसबाहेक, हामी एकसाथ मिलेर कुन प्रकारको सहयोग उपयुक्त छ पत्ता लगाउन सक्छौं।
के तपाई आफ्नो कम्पनीलाई अर्कोसँग मर्ज गर्न चाहानुहुन्छ, किनकि तपाई उदाहरण को लागी विकासलाई उत्प्रेरित गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसोभए त्यहाँ मर्जरका तीन प्रकार छन्: कम्पनी मर्जर, स्टक मर्जर र कानूनी मर्जर। तपाईको कम्पनीका लागि कुन उपयुक्त उपयुक्त स्थितिमा निर्भर गर्दछ। Law & More वकिलहरूले तपाईंलाई यस विषयको बारेमा सल्लाह दिन सक्छन्।
कहिलेकाँही अर्को कम्पनीले तपाइँमा चासो लिन सक्दछ। यो तपाईं उसलाई आफ्नो व्यापार बेच्न को लागी प्रस्ताव गर्न सक्छ। यदि तपाईं यस अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने लक्ष्य राख्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई पहिले नै सल्लाह प्रदान गर्न सक्दछौं। हामी तपाईका लागि वार्तालाप पनि गर्न सक्दछौं।
यदि कुनै कम्पनीले उनीहरूको सेयर बेच्न चाहँदैन र ट्रान्सफरी सेयरधारकको नजिक पुग्छ भने हामी एउटा प्रतिकूल टेक ओभरको कुरा गर्छौं। हामीलाई थाहा छ कि त्यस्ता अवस्थाहरूमा तपाईंको कम्पनीको सुरक्षा कसरी गर्ने र तपाईंलाई कानुनी सल्लाहको साथ सहयोग गर्न सक्दछौं।
यसबाहेक, यो आवश्यक छ कि तपाईंले बाँकी लगनशीलता पूरा गर्नुभयो, विशेष गरी यदि तपाईं कम्पनीको रूपमा अर्को कम्पनी खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं मर्जर वा अधिग्रहणको बारेमा सोच्ने-छनौट गर्नको लागि आवश्यक सबै जानकारीहरू चाहनुहुन्छ।
को कर्पोरेट वकिल Law & More तपाइँ तपाइँको कम्पनी को बारे मा एक अंतर्दृष्टि कानूनी परामर्श दिनुहुन्छ। हामी कानूनलाई व्यावहारिक सर्तमा अनुवाद गर्दछौं, ताकि तपाईं हाम्रो सल्लाहबाट साँच्चिकै लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। छोटकरीमा, Law & More निम्न मामिलाहरूमा तपाईंलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न सक्छ:
। कम्पनीको स्थापना
Companies कम्पनीहरूका बीच सहयोग
Rs मर्जर र अधिग्रहणहरू
• सम्झौता र मुद्दा चलाउने जब यो शेयर होल्डरहरू र / वा सहयोगीहरू बीच विवादको कुरा आउँछ
• निर्देशक दायित्व